1 Agosto, devozione a Sant'Alfonso Maria de'Liquori | Ilblogdellafede
Ọgọst 1, nraranye nye Sant'Alfonso Maria de'Liquori
Naples, 1696 - Nocera de 'Pagani, Salerno, 1 Ọgọst 1787
Amụrụ ya na Naples na 27 Septemba 1696 ndị nne na nna ndị ama ama obodo. Mụọ ihe nka na iwu. Mgbe afọ ole na ole nke ịgba akwụkwọ, ọ kpebiri itinye onwe ya kpam kpam nye Onyenwe anyị. N'ịhọrọ ụkọchukwu na 1726, Alfonso Maria raara ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ oge ya niile na ozi ya nye ndị bi na mpaghara ndị ogbenye kacha biri na Naples na narị afọ nke iri na asatọ. Ka ọ na-akwado maka ịkwado maka ozi ala ọzọ n’ọwụwa anyanwụ, ọ gara n’ihu ọrụ ya dị ka onye na-ekwusa ozi ọma na onye nkwupụta na, ugboro abụọ ma ọ bụ atọ kwa afọ, na-ekere òkè n'ọtụtụ na mba ndị dị na alaeze ahụ. Na Mee 1730, n'ime oge ezumike ike, ọ zutere ndị ọzụzụ atụrụ nke ugwu nke Amaalfi, na-ahụ nnukwu mgbahapụ ụmụ mmadụ na okpukperechi ha, ọ hụrụ mkpa ọ dị idozi ọnọdụ nke na-ewute ya dị ka onye ọzụzụ atụrụ na dị ka nwoke gụrụ akwụkwọ na narị afọ. nke ọkụ. Ọ hapụrụ Naples na ụfọdụ ndị enyi, n'okpuru nduzi bishọp nke Castellammare di Stabia, ọ hiwere ọgbakọ nke SS. Onye nzoputa. N’ihe dị ka n’afọ 1760 ka a họpụtara ya bishọp nke Sant'Agata, ma chịkwaa diocese ya na ntinye, rue mgbe ọ nwụrụ na 1 Ọgọst 1787. (Avvenire)
Onye nchebe m dị ebube ma hụ n’anya, Saint Alfonso na ị dọgbuola n’ọrụ wee tụọ ahụhụ iji mesie ndị mmadụ obi ike site na mkpụrụ nke mgbapụta, lelee anya ọjọọ nke mkpụrụ obi m dara ogbenye ma meere m ebere.
Maka arịrịọ dị ike nke gị na Jizọs na Meri nwere, jiri ezi nchegharị, gbaghara m mmejọ m ndị gara aga, oke egwu mmehie na ike iguzogide ọnwụnwa oge niile.
Biko mee ka m gosipụta ụdị onyinye ọrụ ebere ahụ siri ike nke obi gị na-enwu mgbe niile ma na-eme nke ahụ site na iitatingomi ihe atụ gị na-enwu, ana m ahọrọ uche Chineke dịka naanị iwu m na ndụ m.
A na m ario ariri m obi m ike nye Jizọs, nwe obi ebere na obi m niile nye Meri na amara ikpe ekpere oge niile na ịnọgidesi ike n'ozi Chukwu ruo oge ọnwụ m, ka m wee nwee ike sonyere gị n'ikpeazụ ito Chineke na Meri Kachasị nsọ ruo mgbe ebighi-ebi. Ka ọ dịrị.
SITE NA AKW WKWỌ:
Mmepụta akwụkwọ ọgụgụ ya na-atọ ụtọ, ebe ọ na-abịa ịgụnye ezigbo aha otu narị na iri na otu na ịnabata nnukwu okwukwe atọ, okwukwe na ndụ ime mmụọ. N'ime ọrụ ndị metụtara omume, na usoro nke oge, anyị nwere ike icheta nleta ndị SS. Sakramento na nye Maria SS. compendium nke echiche ya.
O kewapụkwara "abụ mmụọ": ndị ama ama na ihe atụ, n'etiti ndị a, "Tu scendi dalle stelle" na "Quanno nascette ninno", otu n'asụsụ na nke ọzọ na olumba
Site na “VISITE AL SS. AKW ANDKWỌ na SITE MARY. "
Kachasị Nsọ na-amaghị nwoke na nwanyị na nne m, Mary, mụ onwe m bụ onye kachasị ihe niile, akpọghachiri m gị onye bụ nne nke onye nwem, eze nwanyị nke ụwa, Onye nkwupụta, olile anya, mgbaba nke ndị mmehie.
Ana m asọpụrụ gị, eze nwanyị, ana m ekele gị maka ekele niile ị nyere m ruo ugbu a, karịa maka ịtọhapụ m na hel, ọtụtụ ugboro ka ọ masịrị m.
Ahụrụ m gị n'anya, nwanyị kacha hụ n'anya, na maka nnukwu ịhụnanya m nwere n'ebe ị nọ, m na-ekwe nkwa na m ga-achọ ijere gị ozi mgbe niile ma mee ihe m nwere ike ime ka ndị ọzọ hụkwa gị n'anya.
Ana m etinye ntụkwasị obi m niile n'ime Gị; nzọpụta m.
O nne nke obi ebere, were m dika odi oru gi kpuchie m akwa m, ma ebe obu n’ike n’ike n’ebe Chukwu no, gbaputaranye m n’agha niile, ma obu nweta m ike imeri ha rue onwu.
A na m arịọ gị maka ezi ịhụnanya maka Jizọs Kraịst, sitekwa na gị, enwere m olileanya inweta enyemaka dị mkpa ịnwụ n'ụzọ nsọ.
Mama m, n’ihi ịhụnanya ị nwere n’ebe Chineke nọ, biko nyere m aka mgbe niile, mana karịchaa n’oge ikpeazụ nke ndụ m; ahapụla m ruo mgbe ị ga-ahụ ka m nwere nchekwa na Eluigwe iji gọzie gị ma bụọ ebere gị maka mgbe ebighi ebi. Amen.
SITE “NKPUTA JESUS ​​KRISTI”
Ido-nsọ nile na izu-ike nke mkpụrụ-obi gụnyere n’ịhụ Jizọs Kraịst Chineke anyị, mma anyị kachasị elu na Onye Nzọpụta anyị. Ebere bụ nke na-ejikọ ma chekwaa omume ọma niile na-eme mmadụ zuru oke. Ọ bụ na Chineke ekwesighi ka anyị hụkwuo anyị n'anya? Ọ hụrụ anyị n'anya site na mgbe ebighi ebi. «Nwoke, Onye-nwe kwuru, cheta na ọ bụ m bụ onye hụrụ gị n’anya. Were nọghị n'ụwa, ụwa anọghịkwa n'ebe ahụ ma ahụrụ m gị n'anya. Ebe obu na m bu Chukwu, a huru m gi n'anya ». Hụ Chukwu na mmadụ kwere ka ha mee ka ha adọta onwe ha na-eweta uru, ọ chọrọ site n'onyinye ya jide ha n'ịhụnanya ya. N'ihi ya, ọ sịrị: "Achọrọ m ịdọta ndị mmadụ ka ha jiri m ọnyà ndị ahụ nke kwere ka ndị mmadụ hụ m n'anya, ya bụ, agbụ nke ịhụnanya." Ndị a bụ onyinye Chineke nyere mmadụ. Ke enye ama akanam on o ukp o with n odudu ke mbiet esie, ye ekikere, ikike ye uduak, ony u owed n enyenede ikike, enye okobot eny i heaven n ye eny o earth n ye mme other nkp o efen ke ntak owo; nke mere na ha jere ozi mmadụ, mmadụ hụkwara ya n'anya maka ọtụtụ onyinye. Ma Chineke enweghi obi uto inye anyi ndia nile mara mma. Iji weghara ịhụnanya anyị niile, ọ bịara inye anyị niile. Nna nke mgbe ebighi-ebi bịara nye anyị otu Ọkpara ọ mụrụ nanị ya. Ebe ọ hụrụ na anyị niile nwụrụ anwụ na ewepụrụ amara ya site na mmehie, gịnị ka o mere? N’ihi ịhụnanya dị ukwuu, n’ezie, dị ka Onye ozi ahụ dere, maka oke ịhụnanya o mere ka anyị zite Ọkpara ya ọ hụrụ n’anya ka ọ gboo anyị, ma nyekwa anyị ndụ ahụ nke mmehie wepụrụ anyị. N’inye anyị Ọkpara ahụ (agbagharaghị Ọkpara ahụ ka ọ gbaghara anyị), ya na Ọkpara ahụ ka O nyere anyị ihe ọma niile: amara ya, ịhụnanya ya na elu-igwe; ebe ngwongwo ndia nile di obere karie Okpara ahu: "Onye n’echebeghi Ọkpara nke aka ya, kama o nyere ya maka anyi, olee otu anyi gaghi esi enye anyi ihe niile?" (Rom 8:32)
← Na post gara aga Gara aga post:Ezi nrara nke taa: uwa kwuru banyere Chukwu
Ọzọ Post → Post ozo:Chee echiche taa ma ọ bụrụ n’ịhụ n ’obi asị